नेपाली कांग्रेसले पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा कसलाई उमेदवार बनाउँला ? | News Dabali
नेपाली कांग्रेसले पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा कसलाई उमेदवार बनाउँला ?
March 28, 2017 | 4:20 pm
पर्वत । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट भित्र आगामी बैषाख ३१ गते हुने स्थानिय निर्वाचनमा को को प्रतिष्पर्धामा उत्रन चाहेका होलान भनेर धेरैलाई लागि रहेका हुन सक्छ । धेरै केही उमेदवारहरुको बारेमा आफ्नो धारणा पनि बनाएका हुन सक्छन ।
नेपाली कांग्रेस पर्वतले उमेदवार छनौटका लागि औपचारिक रुपमा छलफल शुरु नगरेपनि भावी उमेदवारको रुपमा आफ्नो दाबेदारी राख्दै जिल्ला देखि केन्द्र सम्म भने नेताहरु धाउन थालेका छन । २० बर्ष पछि चुनाब हुने भएका कारण पनि धेरै जना आकाँक्षी देखिएका छन नेपाली कांग्रेस भित्र ।
पर्वतको सदरमुकाम रहेको र निर्वाचन क्षेत्रको समेत ठुलो हिस्सा ओगटेको कुस्मानगरपालिकाका को उमेदवार हुने भन्ने चर्चा सबैभन्दा बढी छ । धेरैले पहिले नै कुश्मा नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट रामचन्द्र जोशी उमेदवार हुने अनुमान गर्दै आएका कारण पनि उनी नै कांग्रेस भित्र सबैभन्दा बलियो दाबेदार हुन । लामो समय देखि नगरपालिकाको प्रमुख नै आफ्नो लक्ष्य भएको बताउने गरेका , नगरसभापति र नगरपालिकाको संयन्त्रमा काम गरेका जोशीलाई नै अन्तिममा उमेदवार बनाउने अनुमान छ कार्यकर्ताको । अन्य दल संग समेत राम्रो सम्बन्ध बनाएकाले पनि जोशी उमेदवार बनाउँदा कांग्रेसलाई निर्वाचन जित्न सहज हुने अनुमान गरेको पाइन्छ पार्टीभित्र र बाहिर पनि । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा शिक्षक संघका पुर्ब केन्द्रिय उपाध्यक्ष बसन्तबहादुर सिके, कांग्रेसका क्षेत्रिय सभापति गंगाधर पौडेल र डा. चुणामणि शर्मा पनि नगरपालिका भित्र प्रमुखका दाबेदार हुन । शिक्षकहरुका बिचमा राम्रो सम्बन्ध भएका तथा बैचारिक ब्यक्ति समेत भएकाले सिके पनि बलियो दाबेदार हुन । खुर्कोटका पुर्व गाबिस अध्यक्ष रहेका पौडेल पनि केन्द्र र जिल्ला नेतृत्वबाट रुचाईएका ब्यक्ति हुन भने शिक्षक संघका पुर्ब अध्यक्ष शर्मा पनि अर्का बलिया उमेदवार हुन । ब्यबस्थापिका संसद सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले रामचन्द्र जोशीलाई समर्थन गरेपनि नवराज गुरुङ्ग, राम शर्मा, बिद्वान गुरुङ्ग लगायतका नेताहरु डा. शर्माको पक्षमा लबिङ्ग गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कहाँ जाने तयारीमा रहेका कारण पनि उनी जोशीका प्रतिष्पर्धी देखिएका छन । दुई मध्ये एकले बाजी मार्ने अनुमान छ तर अहिले सम्म उम्मेदवारको रुपामा चर्चामा नरहेपनि पुर्ब जिल्ला सभापति लालकाजी गुरुङ्गलाई केन्द्रले उमेदवार बनाएमा आश्चार्य नहुने एक कांग्रेसी कार्यकर्ताले बताए । रामचन्द्र पौडेलको बिश्वासपात्र रहेका गुरुङ्ग मेयरको उमेदवार बनेर आउन सक्ने दाबी ती कार्यकर्ताको छ । महिलाबाट प्रमुखमा उठाउनुपर्दा कांग्रेसले महाधिबेशन प्रतिनिधी सिता काफ्लेलाई उठाउन सक्छ । पुरुष मेयर र महिला उपमेयर उठाउँदा उपमेयरमा काफ्ले संगै जिल्ला सदस्य सरस्वती शर्मा जिज्ञासु र मिना कर्माचार्य पनि सम्भावित उम्मेदवार हुन ।
नयाँ नगरपालिका भएपनि फलेवास नगरपालिकामा पनि चर्को चुनाबी प्रतिष्पर्धा हुने भएकाले नेपाली कांग्रेसबाट धेरै आकाँक्षी देखिएका छन । अहिले सम्म महासमिति सदस्य गंगाधर तिवारी र राधा क्षेत्रीलाई लाई सबैभन्दा बलियो दाबेदार मानिएको छ कांग्रेस भित्र । आर्थिक परिचालन गर्ने हिसाबले तिवारी र पछिल्लो समय सबैभन्दा लोकिप्रय नेतृको रुपमा उदाएका कारण पनि क्षेत्रीलाई पनि बलियो दाबेदार मानिएको छ । महाधिबेशन प्रतिनिधी गंगाराज शर्मा पनि अर्का शसक्त दाबेदार हुन । थापाठाना गाबिसका पुर्ब अध्यक्ष थमानसिंह थापाले पनि प्रमुखमा दाबा गरेका छन । महाधिबेशन प्रतिनिधी मुना भुसाल र रेखा गुरुङ्ग पनि मेयर र उपमेयरका दाबेदार हुन । जिल्ला सदस्य युक्तप्रसाद श्रेष्ठ पनि दाबेदार हुन । अन्तिममा गंगाधर तिवारी, राधा क्षेत्री र युक्त श्रेष्ठ मध्ये एकले मेयरमा उमेदवार बन्ने अवसर पाउनेछन भने त्यस्तो अवस्थामा रेखा गुरुङ्ग उपमेयरको उम्मेदवार बन्ने अनुमान छ ।
जलजला गाउँपालिकामा पछिल्लो समयमा देखिएको केन्द्र राख्ने बिबाद र अखण्ड नेपाल पार्टी र राप्रपा तथा माओबादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरुको एमाले प्रबेशले कांग्रेसको उम्मेदवार छनौटमा समेत प्रभाब पार्ने देखिएको छ । कांग्रेसले आफुँलाई सबैभन्दा बलियो शक्तिको रुपमा आँकलन गरेको बेला एमालेमा अन्य दलबाट नेता प्रबेश गरेपछि एमाले बलियो हुँदा अब कुन भेगका उमेदवारलाई उठाउँदा आफ्नो पक्षमा माहौल बन्छ भनेर नेताहरु अन्यौलमा देखिन्छन । अहिले सम्म कांग्रेस बलियो देखिएको लुंदीखोला वारीको क्षेत्रबाट उमेदवार बन्न आँकाक्षी रहेका , पुर्ब क्षेत्रिय सभापति दुर्गाबहादुर खत्री, राजु आचार्य र रुद्रलाल उपाध्याय , क्षेत्रिय समितिका सदस्य बिप्लब हमाल दाबेदार देखिन्छन भने लुङ्गदी पारीबाट जिल्ला कोषाध्यक्ष रामकृष्ण मल्ल जिल्ला सदस्य कृष्ण केसी, माझफाँटका पुर्व गाउँ सभापति चन्द्रबहादुर जिसी ,उद्योग बाणिज्य संघ वारीबेनी उपशाखा अध्यक्ष भिष्म मल्ल अध्यक्षका दाबेदार छन । पछिल्लो आन्दोलनका कारण भेगिय मत प्रभावित हुने भएकाले सबैभन्दा बढी कठिन उमेदवार छनौट र बिजय हुनका लागि कांग्रेसलाई गाउँपालिकाको केन्द्रले बनाएको छ । यद्यपी नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्ष रामकृष्ण मल्ल दाबेदार हुन । पार्टीमा पदाधिकारी रहेका कारण र निर्वाचनमा आर्थिक परिचालन गर्ने हिसाबले पनि उनलाई अघि बढाउने संभावना छ । उनी माझफाँटका भएपनि दुबै क्षेत्रमा बढी बिबादित छैनन । रामकृष्ण मल्ल, कृष्ण केसी, राजु आचार्य र चन्द्रबहादुर जिसीले उमेदवारमा बाजी मार्ने अनुमान छ । दुर्गाबहादुर क्षेत्रीलाई अघि नसार्दा शक्ति गुटगत हिसाबले पनि जिल्लामा उमेदवार छनौट कठिन हुने देखिन्छ । । यस गाउँपालिकामा उपाध्यक्षमा सिमा गर्बुजा , लेकफाँटकी सपना रेग्मी र लक्ष्मी हमाल मध्ये एकलाई उमेदवार बनाउने संभावना छ ।
मोदी गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव विश्वप्रकाश प्रसाइ उमेदवार हुन सबैभन्दा बलियो संभावना भएका ब्यक्ति हुन । तर उनी गाउँपालिकामा निर्वाचन उठ्न इच्छुक नभएको बताउँदै आउँदा इन्कार पनि गरेका छैनन । उनी उमेदवार हुँदा अन्यको दाबेदारी छायाँमा पर्ने छ तर पुर्ब क्षेत्रिय सभापनि बलभद्र शर्मा, महासमिति सदस्य मिना केसी र जिल्ला सदस्य महेश शर्मा(मधु) पनि शसक्त दाबेदार हुन । प्रसाईले दाबी छाड्दा बलभद्र र मधु मध्ये एक उमेदवार बन्नेछन भने उपाध्यक्षमा मिना केसी निर्बीकल्प देखिएकी छन । पार्टीमा लामो समय देखि लागेकी केसी अध्यक्षकै दाबेदार हुन तर उनलाई उपाध्यक्ष नबनाउँदा अन्याय हुने धारणा पनि कांग्रेसका कार्यकर्तामा छ । तर बिश्वप्रकास प्रसाई उमेदवार नहु्ँदा नेपाल महिला संघकी जिल्ला सभापति जोगमाया प्रसाईलाई उपाध्यक्षको रुपमा अघि सार्नेछन भन्ने अनुमान पनि छ । महिला नेतृ ललितकला गुरुङ्ग पनि अध्यक्षको दाबेदारी गर्न सक्ने भएकाले बाजी नमार्लिन भन्न सकिन्न ।
महाशिला गाउँपालिकामा ने प्रपिाली कांग्रेस धेरै कम्जोर भएका कारण धेरैले उमेदवार हुन खुलेर लबिङ्ग थालेका छैनन तर महाधिबेशन प्रतिनिधी मोहन गुरुङ्ग, जिल्ला सदस्य अशोक उँचै ठकुरी, पुर्ब क्षेत्रिय सदस्य उज्जवल गुरुङ सम्भावित अध्यक्षका उम्मेदवार हुन । मोहन गुरुङ्ग उम्मेदवार नहु्ँदा अशोक उचै उमेदवार बन्नेछन । उपाध्यक्षका लागि जिल्लास्तरमा पहिचान बनाएका नेतृ नभएकाले स्थानिय स्तरमा उमेदवार बनाउने संभावना छ ।
विहादी गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा उरामपोखराका पुर्ब गाबिस अध्यक्ष आनन्द भुषाल सबैभन्दा बलियो संभावना भएका उमेदवार हुन । पुर्ब महाधिबेशन प्रनिनिधी तिलक कुवँर पनि अध्यक्षका दाबेदार हुन भने हरि नेउपाने पनि अर्का दाबेदार देखिएका छन । कांग्रेसका क्षेत्रिय सभापति क्या धनबहादुर थापा, क्षेत्रिय समितिका पुर्व सचिब गोबिन्द पराजुली पनि दाबेदार हुन । वहाकीका सभापति हरि भुसाल पनि दाबेदार छन । यो गाउँपालिका पनि कांग्रेसका जिल्लास्तरका महिला नेतृ देखिएका छैनन । उपाध्यक्षमा गाउँ तहकै महिला नेतृलाई उपाध्यक्षको रुपमा अघि बढाउने संभावना छ ।
पैयूँ गाउँपालिकामा कांग्रेसका सबैभन्दा बलियो दाबेदार महासमिति सदस्य खगेन्द्रं तिवार्री े हुन । दुई पटक जिल्ला सभापतिमा पराजित भएका र जनमत राम्रो भएका कारण उनको संभावना बढी छ । खगेन्द्र संगै महाधिबेशन प्रतिनिधी राजेन्द्र तिवारी पनि उत्तिकै शसक्त दाबेदार देखिएका छन । उनी पनि पछिल्लो समयमा बलियो दाबा गर्ने अवस्थामा छन । पोखरामा बसेर राजनिती गर्दै आएका जीतबहादुर गुरुङ्गले पनि दाबा गरिरहेका छन भने हुवासका पुर्व गाबिस अध्यक्ष तथा पुर्ब क्षेत्रिय सभापति एकनारायण न्यौपाने पनि दाबेदार हुन । क्षेत्रिय सचिब सुमन तिवारीले पनि अध्यक्षमा दाबा गरिरहेका छन । भिमसेन गुरुङले पनि अध्यक्षमा दाबा गरेका छन । डम्बर प्रधान पनि अध्यक्षका दाबेदार हुन ।उपाध्यक्षमा भने ज्ञानु तिवारी र अन्य केही महिला नेतृ दावेदार देखिएका छन ।